I-Quark Promote Inikela ngesixazululo se-Hybrid seZidingo Zakho Zokushicilela Ibhizinisi | Martech Zone
I-Quark Promote Inikela ngesixazululo se-Hybrid seZidingo Zakho Zokushicilela Ibhizinisi
NgoLwesine, Novemba 26, 2009 NgoLwesine, Novemba 26, 2009 Douglas Karr
UQuark wethule uhlelo lwewebhu lwe-hybrid olufaka amathempulethi obuchwepheshe kanye nesoftware entsha, I-Quark Promote. Yimodeli enhle kakhulu ... landa uhlelo olusekelwe kwiWindows futhi ungaqala ukuhlela nokulayisha izinto zakho zokumaketha.
Lapho izinto zakho sezilayishiwe, ungaziphrinta futhi zisakazwe endaweni yakho ngenethiwekhi yabashicileli. Le nsizakalo ikuvumela ukuthi wakhe amakhadi wokuqokwa, izincwajana, amakhadi webhizinisi, amakhuphoni, amashidi wedatha, izimvilophu, amaflaya, i-letterhead namakhadi eposi kuma-templates athuthukile ngokomsebenzi. Kukhona izifanekiso ezimbalwa zobungcweti esizeni esivele zikhona - kusuka ku-Accounting kuya kwizinsizakalo Zezilwane.
UQuark uvule isevisi ku- amaphrinta azimele kanye ne abaklami abazimele nabaqeqeshiwe. Ebhizinisini elincane elithi “Zenzele Wena”, lesi yisixazululo esingonga inhlangano isikhathi, umzamo nemali.
Angizange ngiyivivinye insizakalo (ivela kuphela nge-Windows), kepha ngizoba nentshisekelo yokuzwa kulabo abayizamile. Izinjini nabahleli be-intanethi engizisebenzisele izinto zokuphrinta bekunzima kakhulu ukuzisebenzisa… le ndlela ye-hybrid ingaba yisixazululo esikhulu kuze kube yilapho izixazululo eziku-inthanethi zingathola.
Idizayini yokuhlanganisa izinto ngama-99designs
Izizathu Zebhizinisi eziyi-15 zokusebenzisa i-Twitter
Nov 27, 2009 ngo-9: 21 PM
kukhona isivivinyo samahhala ongasisebenzisa?